Cleo गरेको इच्छा | शीर्ष स्लट साइट | Mobile Casino Online | £€$800 Deposit Bonus :)
तपाईं एक सभ्य नम्बर एक खेल खोजिरहेको भने अनलाइन स्लट बोनस विशेषताहरु, त्यसपछि विकास गेमिङ द्वारा Cleo गरेको इच्छा गर्नुपर्छ. यो प्राचीन मिश्र-थिम्ड भिडियो स्लट तपाईंले तीन आधार खेल सुविधाहरू र दुई फ्री स्पिन बोनस सुविधाहरू कुल प्ले गर्न अनुमति दिन्छ. अन्त सम्म पढेर यी बारेमा थप जान्न.
थप बारे भएको अनलाइन स्लट बोनस विशेषताहरु थाह
रूपमा पहिले मा यसो, Cleo गरेको इच्छा तीन आधार खेल बोनस सुविधाहरू आउँछ. यी सबै सुविधाहरू आधार खेल समयमा अनियमित मा सक्रिय छन्. तपाईं एक बालुवा को भाग्य छ, जंगली रीलों र ग्यारेन्टि जंगली रीलों थप्न यो अनलाइन स्लट बोनस खेल उपलब्ध सुविधा.
यो स्लट खेल आउँछ5रील र 25 paylines. को रील मा प्रतीक ankhs समावेश, बहुमूल्य कंगन, scarab beetles र गेम लोगो (यी सबै उच्च मान छ). तपाईं पनि एक को निर्वाचकगण मानक खेल कार्डहरू, K, Q, जे,9र 10 (यी कम मान छ). जबकि स्क्याटर एक मिश्री पिरामिड छ जंगली क्लियोपेट्रा मिश्र को रानी छ.
अहिले फिर्ता आधार खेल बोनस सुविधाहरूमा. को भाग्य बालुवा तपाईं बस एक उच्च मूल्य प्रतीक मा रील हरेक उच्च मूल्य प्रतीक रूपान्तरण गर्न अनुमति दिन्छ. यो संग, तपाईं उच्च पेआउट लागि संयोजन र multipliers विजेता पाउन सक्छौं. जोड जंगली रीलों देखिन्छ अंधाधुंध र तपाईं आफ्नो विजेता संभावित बढावा गर्न रील देखा जंगली प्रतीक छ. एउटा सक्रिय payline मा पाँच wilds भूमि र कमाउन 500 प्रक्रिया मा सिक्का. को ग्यारेन्टि जंगली रीलों लागि, माथि पाँच रील गर्न तिनीहरूलाई wilds थप तपाईं प्राय WINS कमाउन दिनु हुनेछ.
सबै तपाईं आवश्यक रील स्पिन गर्न 30p एक टोकन योगफल. त्यहाँ लागि उच्च बाजी बनाइने र खेलाडीहरू उच्च रूपमा £ 60 को रूपमा प्रति स्पिन बाजी गर्न सक्नुहुन्छ प्रावधान छ.
यो अनलाइन स्लट बोनस खेल फ्री Spins विशेषता
यो अनलाइन स्लट बोनस खेल दुई निःशुल्क spins आउँछ, अर्थात्: अनन्त धन र Cleo गरेको परेड. जब तपाईं रील मा तीन पिरामिड स्क्याटर प्रतीक को एक न्यूनतम भूमि दुवै मुक्त spins सक्रिय छन्.
तिमी खेल्न दुई निःशुल्क spins मध्ये एउटा चयन गर्न हुनेछ. तपाईं अनन्त धन मुक्त spins चयन भने, त्यसपछि बीच खेल्न आशा5र 10 निःशुल्क spins. तथापि, Cleo गरेको परेड रील मा स्ट्याक क्लियोपेट्रा जंगली प्रतीक हुनेछ5अवतरण विजेता संयोजन तपाईंलाई मद्दत गर्न.
यो अनलाइन स्लट बोनस खेल संग, समय को एक लामो अवधिको लागि मनोरंजन भइरहेको पक्का हुन सक्छौं. आधार खेल बोनस सुविधाहरू, साथै निःशुल्क spins रूपमा, WINS पाउन मौका संग खेलाडीहरू प्रस्ताव र आफ्नो पेआउट बढावा.